ऊर्जा मालिकको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ? सम्पर्क राख्नुहोस् LAW & MORE
सिद्धान्तमा, ऊर्जा कानून महत्वपूर्ण छ जब ऊर्जा किन्न, आपूर्ति वा उत्पन्न गरिएको छ। उर्जा आपूर्तिकर्ताका साथै कम्पनीहरू र निजी व्यक्तिहरूले यसमा भूमिका खेल्छन्। Law & Moreदिगो ऊर्जाको उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ विकासलगायत ऊर्जा कानूनमा भएका सबै घटनाक्रमका वकिलहरूले नियालेर रहेका छन्। हाम्रो विशेषज्ञहरु को एक व्यापक अभिमुखीकरण छ, उनीहरु लाई ऊर्जा को सबै रूप मा ध्यान केन्द्रित। त्यसो भए, तेल, प्राकृतिक ग्यास, बिजुली, बायोमास र हावा र सौर्य ऊर्जा। यस व्यापक अभिमुखीकरणको कारण, हाम्रा ग्राहकहरू आपूर्तिकर्ता र उत्पादकका साथै उपभोक्ता, लगानीकर्ता र सामग्री तथा सेवाहरूको आपूर्तिकर्ता हुन्। अन्तमा, हामी औद्योगिक साइटहरूमा उपयोगिता आपूर्तिको क्षेत्रमा पनि काम गर्छौं, स्टीम र demineralised पानी जस्ता उत्पादनहरूलाई कभर गर्दै। त्यसोभए, तपाईंलाई ऊर्जा कानूनको क्षेत्रमा विशेषज्ञको आवश्यकता छ? Law & More दुबै आइन्डहोभन र एम्स्टर्डमबाट तपाईलाई निम्न सेवाहरू प्रदान गर्दछ:
भविष्य-प्रमाणित ऊर्जा र मौसम नीति अनुसरण गरेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न नेदरल्याण्ड्सले दिगो विकासको लागि ऊर्जा सम्झौता गरेको छ। यस सम्झौताको उद्देश्य नेदरल्याण्ड्स पूर्ण रूपमा दिगो ऊर्जालाई २०2050० सम्म सञ्चालन गर्नु हो। ऊर्जा सम्झौतामा कम्पनीहरूका लागि विभिन्न उद्देश्यहरू छन् जसमा उनीहरूलाई ऊर्जा बचत गर्नु आवश्यक छ। थप रूपमा, डच सरकारले ऊर्जा क्षमताको सुधारको अनुगमन गर्न ठूलो संख्याका क्षेत्रहरूसँग दीर्घकालीन सम्झौताहरू गरेको छ। यी सम्झौताको अंश भएका कम्पनीहरूका धेरै फाइदाहरू हुनेछन्: तिनीहरूले लागत बचत, बहुविध प्रक्रिया नवीनताहरू र एक स्थायी छविबाट लाभ उठाउँछन्। तर त्यहाँ बहु-वर्ष सम्झौताहरूसँग सम्बन्धित थुप्रै दायित्वहरू पनि छन्। यी सम्झौताहरू जटिल छन् र ठूलो संख्यामा नियमहरू कोरिएका छन्। के तपाईंको कम्पनी पनि नयाँ नियमहरु द्वारा प्रभावित छ? सहि कानूनी समर्थन महत्त्वपूर्ण छ, ताकि तपाई कहाँ उभिनुभयो भनेर थाहा पाउनु पर्छ। कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More र हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुशी हुनेछौं।